सम्पादकीय टीम | Absolut यात्रा
Absolut Viajes एक Actualidad ब्लग वेबसाइट हो। हाम्रो वेबसाइट समर्पित छ यात्रा को संसार र यसमा हामी मूल गन्तव्यहरू प्रस्ताव गर्दछौं जबकि हामी यात्राको बारेमा सबै जानकारी र सल्लाह प्रदान गर्ने इरादा राख्छौं, विश्वको विभिन्न संस्कृतिहरू र उत्तम प्रस्तावहरू र पर्यटक गाइडहरू।
Absolut Viajes को सम्पादकीय टीम बनेको छ भावुक यात्रीहरू र सबै प्रकारका ग्लोब्रोटरहरू तपाईं संग तिनीहरूको अनुभव र ज्ञान साझा गर्न पाउँदा खुशी छ। यदि तपाईं पनि यसको अंश बन्न चाहनुहुन्छ भने, नहिचकिचाउनुहोस् हामीलाई यो फारम मार्फत लेख्नुहोस्.
म सानो भएकोले म स्पष्ट थिएँ कि मेरो कुरा एक शिक्षक हुनुपर्ने थियो। भाषाहरू सँधै मेरो शक्ति भएको छ, किनकि अर्को महान सपनाहरू छन् र छ, विश्वव्यापी यात्रा गर्ने। किनभने ग्रहको विभिन्न भागहरू जान्नका लागि धन्यवाद, हामी सीमा शुल्क, व्यक्तिहरू र आफैंको बारेमा बढि जान्ने प्रबन्ध गर्छौं। यात्रा मा लगानी हाम्रो अधिकतम समय बनाउँदैछ!
एक यात्रा प्रेमी लेखक, म प्रेरणा, कला, वा रचनात्मकताको एक स्रोतको रूपमा विदेशी स्थानहरूको सामना गर्न रमाईलो गर्छु। ती अज्ञात ठाउँहरूबारे जान्नु एक रमाईलो र अविस्मरणीय साहसिक कार्य हो, ती मध्ये एक जसले सदाका लागि छाप छोड्नेछ।
मसँग पर्यटनको दुनियामा २० बर्ष भन्दा बढिको व्यावसायिक अनुभव छ, उही किताब जुन म पढ्दै छु र विश्वभरि नै अविश्वसनीय स्थानहरूको भ्रमण गरिरहेछु।
ओभिडो विश्वविद्यालयबाट स्पेनिश फिलोलोजीमा डिग्री। यात्रा को बारे मा उत्साहित र ती हामी लाई लागेका अद्भुत अनुभव को बारे मा लेखन। यो सबै तिनीहरूलाई साझेदारी गर्न र सबैकोसँग हाम्रो ग्रहमा सब भन्दा सुन्दर ठाउँहरूको बारेमा सान्दर्भिक जानकारी छ। यसैले, जब तपाईं तिनीहरूलाई भेट्न जानुहुन्छ, तपाईंसँग के तपाईंले छुटाउन सक्नुहुन्न भन्नेमा पूर्ण गाइड हुन्छ।
सुसाना मारिया अर्बानो मटेओस
मलाई यात्रा गर्न मन पर्छ, अन्य ठाउँहरू जान्न, सधैं राम्रो क्यामेरा र नोटबुकको साथ। विशेष गरी बजेटको अधिकतम यात्रामा यात्रा गर्न, र सम्भव भएमा बचत गर्न चासो पनि।
म सामाजिक संचारमा स्नातक र प्राध्यापक हुँ र मलाई यात्रा गर्न, जापानीज सिक्न र विश्वभरिका मानिसहरूलाई भेट्न मन पर्छ। जब म यात्रा गर्छु म धेरै हिड्दछु, म जताततै हराउँछु र म सबै सम्भावित स्वादहरू कोशिस गर्दछु किनभने मेरो लागि यात्राको मतलब भनेको मेरो आफ्नै बानीलाई सकेसम्म परिवर्तन गर्नु हो। विश्व अद्भुत छ र गन्तव्यहरूको सूची असीम छ, तर यदि म त्यहाँ पुग्न नसक्ने ठाउँ छ भने, म लेखेर आउँछु।
जब म पत्रकार भएको थिएँ जब म सानो थिएँ, म मात्र यात्रा, प्रेरित परिदृश्य, चलन, संस्कृति, फरक संगीत द्वारा प्रेरित थियो। यात्राको साथ लेख्न समय बित्दै जाँदा मैले त्यो आधा सपना हासिल गरें। र यो त्यो हो कि पढ्ने, र मेरो केसमा भनिरहेको छ, के अन्य स्थानहरू जस्तो छन् त्यहाँ हुनुको एक तरीका हो।